Veterinary: fampahalalana ho an'ny veterinary patterson, sns-BALLYA
Ireo fitaovana sy fomba fitiliana ny fitondrana vohoka ny kisoa
Inona no maha-zava-dehibe ny fitiliana ny fitondrana vohoka aloha? Ho an'ny toeram-piompiana, na bevohoka mandritra ny fiompiana izy ireo dia matetika no olana. Diagnostika mialoha ny fitondrana vohoka ny voa nafafy mba hanafohezana ny tsingerim-pananahana voafafy sy hampitombo ny habetsahan'ny fako isan-taona, ny fitiliana mialoha ny fitondrana vohoka aorian'ny fiompiana dia […]
Afaka mampiasa fitsapana fitondrana vohoka olombelona amin'ny kisoa ve ianao?
Ny fitsapana ny fitondrana vohoka olombelona sy ny fitsapana prenancy ny kisoa dia mampiasa fitsipiky ny fahitana hafa, noho izany ny kisoa dia tsy tokony avela hampiasa kit ny fitsapana fitondrana vohoka olombelona mba hialana amin'ny valiny diso. Fitsapana ny fitondrana vohoka ny olombelona Fitsipika momba ny fitsapana ny fitondrana vohoka ataon'ny olombelona Ny famantarana ny fatran'ny HCG ao amin'ny mony hamantarana raha bevohoka ny vehivavy dia famantarana azo antoka […]
Ahoana no fanariana biby maty?
Ho an'ny omby tratry ny aretina tsy mifindra sy ny trauma mekanika, ny fitsaboana ara-potoana dia tokony hataon'ny mpitsabo areti-mifindra. Ny omby maty dia tokony hokarakaraina tsy amin'ahiahy amin'ny fotoana voatondro ary aorian'ny GB 16548. Ny ronono vokarin'ny ombivavy marary (toy ny hafanana) dia tsy tokony hamidy toy ny ronono ara-barotra amin'ny tsenan-dronono. Taorian'ny areti-mifindra […]